Kuningi akufundayo oweDurban Gen
UMLINGISI weDurban Gen uSibongokuhle Nkosi, onamaphupho amaningi kwezokulingisa Isithombe: SITHUNYELWE
UKULINGISA emidlalweni emikhulu yethelevishini kuyiphupho lanoma yimuphi umlingisi osafufusa futhi kuthatha iminyaka.
Kodwa ithuba lisheshe lafika kuSibongokuhle Nkosi waseMkhamba, eMnambithi, osezinze eThekwini, olingisa indawo kaThembi kwiDurban Gen.
Yize kuyinto enkulu kuye ukuqala ukulingisa emidlalweni emikhulu kodwa ngenxa yokushoda kwesipiliyoni nokulingisa nabantu abanamava, uthi bekumele asebenze ngokuphindiwe.
UMLINGISI weDurban Gen uSibongokuhle Nkosi unamaphupho amaningi ngomkhakha wezokulingisa Isithombe: SITHUNYELWE
Ukulingisa kwiDurban Gen nakuZalo kwenzeke ngesikhathi esanda kwethweswa iziqu zeMusic & Drama eNyuvesi iKwaZulu-Natal.
"Ngaqala ngokwenza inhlolokhono yeDurban Gen ngo-2020, kuZalo ngabonwa uZodwa ngenza umdlalo weshashalazi iMusic in the Air kaJoel Zulu. Kwaqala lapho ukuthi ngilingise kule midlalo," kuchaza uSibongokuhle.
Ukushintsha indlela ayiyona angene ezinyaweni zendawo ayilingisayo ngezinye zezinto ezike zamthwesa ubunzima.
"Le ndawo engiyidlalayo ayihlukile kakhulu kunomuntu engiwuyena ekhaya. Into eqale yaba nzima kimi ngokulingisa ukuthi ngiqala ngijabule kodwa bese ngiphoqeleka ukuthi ngidumale ngenxa yendawo engiyilingisayo. Kuyinto namanje engisazifundisa ukuthi ngikwazi ukumelana nayo ngendlela," kusho uSibongokuhle.
Ephetha uthe kuningi azibekele kona njengokuqhubeka afunde ukudidiyela nokuqondisa imidlalo yethelevishini. USibongokuhle uthe ukukhangisa ngengqephu nemikhiqizo ngezinye zezinto amatasa nazo uma engalingisi.
Okunye akhonze ukukwenza ukuhlala nomndeni wakhe okubalwa unina omkhulise yedwa ngoba uyise akasekho emhlabeni. Akakhohlwanga ukutusa ozakwabo abambisene nabo kwiDurban Gen, wathi kwenza umsebenzi wakhe ube lula.